Ny sira dia mety ho toerana mamy Mori, Mood Bourgeoisie Cozy voajanahary | ENJOYDESIGN
Home / Interior design / Ny sira dia mety ho toerana mamy Mori, Mood Bourgeoisie Cozy voajanahary | ENJOYDESIGN
2020 / 10 / 17 FisokajianaInterior design 1589 0
Nanana kafe izahay ary niresaka
Ny fifandraisana dia mahatonga antsika hifanakaiky
Lava sy nahafinaritra ny faran'ny herinandro
Andro mahafinaritra dia hiako
Amin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina, miverina amin'ny laoniny tsikelikely ny fiainana, ary manomboka mieritreritra sy mamerina mandinika ny fiainany amin'ny ho avy ny olona.
Nandritra ny valanaretina dia nahatsiaro tsy afa-mihetsika ny olona ary tsy milamin-tsaina noho ny fiheverana tokana ny fiainana amin'ny toerana voafetra mandritra ny fotoana maharitra. Vokatr'izany, ENJOYDESIGN dia nitady andian-tantara maromaro ho avy, nanantena ny hamorona pavilion estetika iaraha-miaina izay hitondra fialan-tsasatra, fahalalahana ary fanantenana amin'ny ho avy, ary hanehoana ny faniriana hiaina amin'ny ho avy.
Trano voninkazo, kafe, mahafatifaty, boky, mariky ny fandriam-pahalemana sy fiononana dia novaina ho olom-pehezina eto, mampifandray ny fiainana tsara miaraka, manitatra ny vodin-trano miaraka amina vondron'olona monina iraisana, ary mahatsapa ihany koa ny fifandraisana ara-pihetseham-po eo amin'ny marika sy ny mpanjifa.
Trano voninkazo ala
Mamony miaraka amin'ny fihetsika feno
Miketrika eo amin'ireo jiro sy aloka mitsingevana
Ny fiheverana ara-javakanto ny freins static
Ataovy tsara tarehy ity fotoana ity
Rehefa mandeha eny amin'ny habakabaka dia voninkazo amin'ny fomba feno sy matanjaka ireo voninkazo, ary feno ny fofon'ny voninkazo mamy ny rivotra, mikoriana amina fiangaliana milamina sy kanto. Mametraka ny sahirana madinidinika, ny olona dia hanomboka diany hizaha ny ho avin'ny fiainana.
Mitsoka ny tsio-drivotra, mahatsapa ny fofon'ny hazavana sy kanto ary fifaliana ao amin'ny habakabaka, mampihetsika ny fifandraisana akaiky eo amin'ny mpifanila vodirindrina, manakaiky ny elanelana misy eo amin'ny olona.
Eo akaikin'ny faritra amoron-dalana dia nanamboatra toerana mahafinaritra izahay mba hilalaovan'ireo biby araka izay ao am-pony. Ny fitaovana fitaratra mangarahara dia manjavozavo amin'ny fetran'ny habakabaka, mahatonga ny fifandraisana eo amin'ny olona sy ny biby ho akaiky kokoa, ary ny fahalianan'ny natiora dia manohina ny fon'ny olona, ​​izay hipoka ny hakanton'ny hetsika madio.
Aroma no kaody miafina an'ny faribolana,
ary ny fidirana amin'ny fihetsem-po
Voninkazo, kafe ary boky
Ny fahatsapana fofona dia manana ny tampony
Ary manaova fotoana mampitony anao
Ao amin'ny fiainana an-tanàn-dehibe frenetic, ny olona dia manantena ny hiverina amin'ny tena toetrany, mitady toerana hiverenana, ary miandry fifampiresahana mafana sy sariaka. Ao amin'ny faritra fisotroana kafe misy zavamaniry maitso vaovao, mampihena ny hafainganam-pandehantsika isika, manadino ireo fanelingelenana marobe ao an-tanàna, ary mankafy ny tolakandron'ny kafe malefaka, fifampiresahana amin'ny hafa ary mahita fitarainana mampihetsi-po.
Ny habetsaky ny maitso maitso dia mandravaka ny manodidina ny fisotroana kafe. Fahatsiarovana tsy tapaka ny natiora ho anao sy ho ahy. Ny fihainoana mozika amin'ny headphone lehibe dia fanaon'ilay bitro mahafinaritra mahafatifaty, Bean Bean. Ny fisehoany dia mahatonga ny habaka mahaliana sy mavitrika kokoa. Mipoitra amin'ny toerana samihafa ao amin'ny habakabaka izy ary miaraka aminao mangina sy mafana.
Hadinoy ny zava-drehetra, ary hiaraka aminao ny zava-drehetra. Ny symbiose an'ny vondrom-piarahamonina mitambatra sy ny estetika velona dia mamela ny olona mitokana na miaraka hanana traikefa ara-pirazanana sy ahazoana aina.
Eo anelanelan'ny anatiny sy ivelany
Mitabataba ny any ivelany ary mangina ny ao anatiny
Manjavozavo ny fetra
Mahatsiaro malalaka isika amin'izao fotoana izao
Ny rindrin'ny ambainy fitaratra mangarahara dia manjavozavo amin'ny fetran'ny habakabaka, mampifandray ny sehatra anatiny sy ivelany. Milentika ny masoandro ka mamela aloka hifindra. Ny fisamborana fotoana mahafinaritra ao anaty fahatairana sy filaminana, ny fahatsoran'ny natiora dia fanasitranana mahafinaritra ho an'ny fanahy.
Izahay dia mitady fahatsiarovana avy any an-tendrombohitra sy eny an-tsaha, ny hatsaran'io fahatsorana sy tsy fananan-tena manokana io. Voahodidin'ny zava-maitso isika dia milentika amin'ity tontolo milamina sy mavitrika ity, izay hamenoan'ny fanantenana voajanahary ny hatsaran'ny natiora amin'ny fanantenana.
Dingana sy rakotra boky, miaraka amina tsipika hanohizana ny fitomboan'ny fomban'ny fombafomba ara-dalàna, dia miseho vetivety ny fijery marevaka amin'ny hazavana sy ny aloka, toa toa tsy misy ny gadona manintona ny fisainan'ny olona tsy manam-petra, amin'ny loko hazo hisarihana ny herin'ny fitoniana.
Miakatra amin'ny tohatra ianao, mihemotra ao aorianao ny maitso maitso, ary ny boaty fasika sy ny faritra fifampiraharahana, misy takelaka miasa mangina miseho eo alohanao.
Ireo mpanjifa izay liana amina tetikasa iray dia afaka mahazo ny vaovao tadiaviny eto; ny ankizy izay mankaleo amin'ny resaka olon-dehibe dia afaka miafina ao amin'ny faritry ny ankizy manokana; ary ny namana tsy misy tanjona dia afaka manohy mizaha ny habaka nizarana. Momba ny fahasamihafana sy ny fampidirana izany rehetra izany, ary izany no atolotry ny United Living Experience Center ho an'ny mpitsidika.
Jiro mihinana farany
Miara-mivory ny namana sasany ary mibitsibitsika
Ny fifandonana alikaola
Ary tsiro ny molotra sy ny nify
Ankafizo ny fiainana amin'izao fotoana izao
Amin'ny fotoana hidiranao ao amin'ny trano fisakafoanana dia hahatsapa ianao fa ao amin'ny mistery an'ny Wizard of Oz. Ny atmosfera manonofinofy sy miafina, izay apetraka amin'ny eritreritrao, dia mitazona ny hatsarany kanto ary mahatonga ny habaka feno majika mahatalanjona, hahatonga ny fonao hihorohoro.
Ny fitambaran'ny jiro manjavozavo, ny sosona matevina ary ny boribory, ny rindrina marokoroko, ny hazavana, ny endrika ary ny fitaovana dia mamorona toerana fisakafoanana ambanivohitra sy fombafomba, tsotra, tsotra ary kanto, izay mitondra ny traikefa an-habakabaka farany, mamoha fahatsiarovana amin'ny fotoana sy toerana, ary mahatsapa ny fifandraisana ara-pientanam-po eo amin'ny marika sy ny mpanjifa.
Ny kalitao sy ny tsiambaratelo, ny fientanam-po mahery vaika sy mahery dia mifangaro, mifanakalo ary mifandona amin'ny habaka, miaraka amina karazana hatevin'ny fotoana, izay asitrika ny mpitsidika, mihidy amin'ny tantara ary mahatsapa ny hakanton'ny romantisme.
Liana amin'ny zaza
Hihomehy fifaliana sy fahasambarana
Hetsika mahatsikaiky sy mihoapampana
Fahafinaretana amin'ny fahazazana daholo izany
Andro fahazaza, tsotra sy madio
Ny faritry ny ankizy dia mampiasa ny fihevitry ny «hiaka sy mihaino» hitantara ny habaka. Ny loko volomboasary vaovao dia mamorona atmosfera falifaly sy velona, ​​fa ny endrika miolikolika kosa dia manasongadina ny fihenjanan'ny zavatra, mamorona tontolon'ny fahafinaretana ho an'ny ankizy. Ny volavola dia mampiasa sakana loko sy endrika hamoronana seho manaitra ary hanomezana hery an'io habakabaka io.
Manomboka amin'ny lasa ka hatramin'ny ho avy, ny habaka dia tsy tokony ho gadra vy na gadra, fa ho mpitatitra ary fitohizan'ny fiainana tsaratsara kokoa. Tahaka ny fitomboan'ny natiora, isika dia mandray ny fiainana vaovao miaraka amin'ny faniriana sy fanantenana. Ity dia fikarohana momba ny vondrom-piarahamonina ho avy, maka ny trano ho toy ny radius lava, mamela ny natiora hiaraka amin'ny fiainana, mamorona seho velona mafana, ary mahazo resonance ara-pientanam-po amin'ny traikefa feno fahafinaretana.
Eto, ny fari-tany eo amin'ny natiora sy ny tanàna dia somary manjavozavo, ny fahatsapana ny fiainana fiainana dia hamboarina indray, ary ny fahaiza-mandanjalanja sy ny fihetsem-po dia hifangaro, fahatsapana lalina sy feno izay hahatonga ny olona hanadino hiverina. Vondrom-piarahamonina velona miaraka amin'ny hafanana sy ny fifandraisana, manaram-po amin'ny sehatra poetika, milalao feno ny sary an-tsaina tsara amin'ny ho avy eo afovoan'ny hehy, hafanana ary tsy fananan-tsiny.
Tetikasa: Vanke - Iraisam-pirenena Mile Golden
Adiresin'ny tetikasa: Guangdong Jiangmen
Orinasa mpamorona: ENJOYDESIGN
Sehatra famolavolana: Drafitra anatiny sy malefaka
ENJOYDESIGN dia natsangana tamin'ny taona 2010 ary any Guangzhou no misy azy. Amin'ny maha orinasa matihanina manao mari-trano anatiny dia manome drafitra vokatra sy endrika namboarina ho an'ny trano fonenana izahay (birao fivarotana, fisaka fisaka, villa, faritra ho an'ny besinimaro) ary tetikasan'ny birao ho an'ny mpanjifa ambony amin'ny indostria samihafa, ary koa ny famolavolana ny fenon'ny R&D mahazatra ho an'ny mpitarika. mpanjifa momba ny trano sy tany ary manome serivisy ho an'ny fanabeazana, fanavaozana taloha ary famelomana indray izahay.
Manana ekipa mpamorona matihanina manana olona mihoatra ny 260 izahay. Amin'ny maha-mpananatra hatsaran-tarehy antsika dia manolo-kevitra izahay fa ny estetika dia mamerina ny fiainana ho lasa tany am-boalohany, ary manizingizina izahay ny hanomboka amin'ny fahatsapana sy ny zavatra niainan'ny mpanjifa, ary manome mpanjifa maro ny famolavolana habakabaka ankehitriny sy vaovao miaraka amin'ny fiteninay manokana. Mino izahay fa ny volavola rehetra dia manomboka amin'ny fiovana, na ny fanompoana ny besinimaro na ny fanovana ny fiainam-bahoaka, na dia misimisy aza ny fanovana.
Maverick isika, fa tsy hafa; milay izahay, fa sariaka kosa.
Previous :: Gray Senior, Avocado Green ary Champagne Pink, toerana romantika misy ny fiaraha-monina Retro sy maoderina Next: Ny fanadihadihana matihanina sy feno indrindra momba ny haitraitra maivana!